Vanoshambira vanoshanda sei?
Iyo yekuzvichenesa yekutsuka ndiyo imwe yemhando dzepamba dzekuchenesa midziyo inoshandiswa nhasi. Dhizaini yayo yakapusa asi inoshanda yakabvisa nekuchenesa guruva uye zvimwe zvidimbu zvidimbu kubva pamawoko nemaoko, uye yakashandura kuchenesa imba kuita basa rinoshanda uye rinokurumidza. Ichishandisa chero chinhu kunze kwekukweva, iyo vhuvhu inorega kubvisa tsvina uye kuichengetera kuraswa.
Saka magamba epamba aya anoshanda sei?
Nzira yakapusa yekutsanangura kuti iyo yekuchenesa inokwanisa kuyamwa sei marara ndeyekufunga nezvayo sehuswa. Paunotora sipo yekumwa kuburikidza nesadza, iko kuita kwekuyamwa kunogadzira mweya wakashata wemukati mukati mehuswa: kumanikidza kwakaderera pane kuya kwemhepo yakapoteredza. Sezvakangoita mumafirimu emuchadenga, uko kutyora munzvimbo yemuchadenga kunosveta vanhu kuenda muchadenga, chinoshenesa chinogadzira kumanikidza mukati, izvo zvinoita kuti kuyerera kwemhepo kuchipinda.
Iyo yekutsuka inoshandisa mota yemagetsi inotenderera feni, inoyamwa mumhepo - uye chero zvidiki zvidiki zvakabatwa mairi - uye nekuisundira kunze kweimwe divi, muhombodo kana mugaba, kugadzira yakashata kumanikidza. Iwe unogona kufunga ipapo kuti mushure memasekondi mashoma zvaizomira kushanda, nekuti iwe unongogona kumanikidza mweya wakawanda kudaro munzvimbo yakavharirwa. Kugadzirisa izvi, vharuvhu ine chiteshi chenguva iyo inoburitsa mweya kubuda kune rimwe divi, ichibvumira mota kuti irambe ichishanda zvakajairika.
Mhepo, zvisinei, haingo pfuuri nekuburitswa kune rimwe divi. Zvingava zvinokuvadza zvakanyanya kune vanhu vanoshandisa vacuum. Sei? Zvakanaka, pamusoro pevhu nemarara izvo zvinonhongedzerwa nevhu, rinounganidza zvakare zvidimbu zvakanaka kwazvo izvo zvisingaite kunge zvisingaonekwe neziso. Kana vakafemerwa muhuwandu hwakawanda zvakakwana, vanogona kukonzera kukuvadza kumapapu. Sezvo zvisiri zvese izvi zvimisikidzo zvakavharirwa nehombodo kana gaba, gaba rinoshambidza rinopfuura nemhepo nepasefa rimwe chete uye kazhinji firita yeHEPA (High Efficiency Particulate Arresting) kubvisa guruva rose. Chete zvino ndipo pakachengeteka mhepo kufema zvakare.
Simba rekuchenesa rinotsanangurwa kwete chete nesimba remota yaro, asiwo kukura kwechiteshi chekutora, chikamu chinosveta tsvina. Iyo diki saizi yekudyiwa, simba rekutsveta rinogadzirwa, sekusvina huwandu hwakaenzana hwemhepo kuburikidza nepamupendero wakamanikana zvinoreva kuti mweya unofanirwa kufamba nekukurumidza. Ichi ndicho chikonzero chekuti vacuum cleaner zvakabatanidzwa netete, zvidiki zvekupinda zviteshi zvinoita kunge zvine yakanyanya kukweva kupfuura yakakura.
Kune mhando dzakasiyana dzakasiyana dzekuchenesa, asi dzese dzinoshanda pamusimboti mumwechete wekugadzira kumanikidza kwakashata uchishandisa feni, kuteya tsvina yakayamwa, kuchenesa mweya wekuburitsa uye nekuuburitsa. Nyika ingave yakasviba nzvimbo pasina ivo.